Matongerwo eNyika, 11 Kurume 2017
Mugovera 11 Kurume 2017
Kurume 10, 2017
VaMutsvangwa Vanoti ZimAsset Yakundikana
Vakarwa muhondo yerusununguko vanoti chirongwa chehupfumi chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation, kana kuti ZimAsset, hachina pundutso yachaita munyika.
Dhora Roramba Kubatika muZimbabwe
Mabhanga mazhinji anonzi haasi kukwanisa kupa vanhu mari dzavo, zvikuru vanenge vachida kutora iri mari yekuAmerica.
UN neZimbabwe Dzounganidza Mari yeKubatsira Vakabatwa neMafashamu
Bazi reUnited Nations re United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA ratenda kuti iro nevehurumende yeZimbabwe vari kutatarika kuunganidza mari iri kudiwa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Kurume 09, 2017
Vanhu Votadza KufambaZvichitevera Kuparadzwa kweMabhiriji neMvura
Bhiriji remuna Hovi rinoita kuti vanhu ava vakwanise kuyambuka vachienda kune zvitoro, zvikoro kana zvipatara rakaparadzwa nemvura.
VaItai Dzamara Vanorangarirwa muHarare
VaDzamara, avo vakasiya basa rekutora nhau vachiti vava kukurudzira VaMugabe kuti vabve pachigaro kuburikidza nekuratidzira mazuva ose vari muAfrica Unity Square, havana kuzoonekwa kubva musi wavapambwa mumusha weGlenview.
VaTsvangirai Voshora Maitiro aVaMugabe Murwendo rweSarudzo dza2018
Mutungamiri webato reMDC, VaMorgan Tsvangirai, vaita musangano nevatori venhau muHarare vakakurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo nemabatirwo esarudzo kana kuti yogadzirira kuratidzira kwakasimba kubva kubato ravo.
VeMoto Republik Vanonzi neKanzuru yeHarare Vaputse Voga Zvivakwa Zvavo
Mugwaro ravaburitsa, veMoto Republik vanobvuma kuti vashandi vekanzuru vanga vachida kuputsa zvivakwa zvavo, aso vanoti izvi zvazomiswa mushure mekupindira kwameya weguta reHarare VaBernard Manyenyeni.
Kurume 08, 2017
Zuva reMadzimai Pasi Rose Rinocherechedzwa muZimbabwe
Vanhukadzi vemuZimbabwe vabatana nemamwe madzimai pasi rose vachipemberera zuva ravanhukadzi pasi rose, kana kuti International Women’s Day, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi.
VaChinotimba naVaMahiya Votatsurana Musangano weVakarwira Rusununguko
Magweta esangano revarwiri vehondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanyorera mapurisa tsamba vachida kuziva chikonzero chiri kupa kuti vavarambidze kuita musangano kuCity Sports Centre muHarare nemusi weChishanu.
Zimbabwe Citizens Initiative Yorangarira VaItai Dzamara neVamwe
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pasi pesangano reZimbabwe Citizens Initiative zviri kuungana paManchester University kuBritain neMugovera uno zvichirangarira murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika, VaItai Dzamara
Kurume 07, 2017
Muzvare Lynda Masarira Opika Jeri Achibva Kumba
Asi mimwe mwedzi minomwe yasendekwa parutivi vachinzi vasapare mhosva yakadai zvakare mukati memakore mashanu ari kutevera.
Zuva reVanhukadzi Rocherechedzwa neChitatu
Mutungamiri wesangano re Shamwari yeMwanasikana, Muzvare Ekenia Chifamba, vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevanasikana nemadzimai dziremekedzwe uye kupembedzawo mabasa ari kubatwa nevanhukadzi munyika.
Kuenderera Mberi kweKutyorwa kweKodzero dzeVanhu Kwoshoropodzwa
VaChibaya Vomirira Mutongo neMuvhuro Vari Muchitokisi
Vashandi veHurumende Vombozeya Mari Yaiswa paTafaura yeKuwedzera Mihoro Yavo
VaAmos Chibaya Vanosungwa Vachipomerwa Mhosva yeKuzvidza Mapurisa Akarambidza Kuratidzira kweBato Ravo